Kutheni zonke ii-imeyile zingaveli kwiPosi kunye nendlela yokulungisa | Ndisuka mac
Kutheni zonke ii-imeyile zingaveli kwiPosi kunye nendlela yokulungisa
Ngamanye amaxesha iapp yeApple Mail kwiMac yakho inokuphazamiseka kwaye musa ukulayisha ngokuchanekileyo zonke ii-imeyile ozigcinileyo. Kwezi meko zihlala zisenzeka kukuba isikrini okanye ibhokisi yebhokisi yeposi ayinanto ngee-imeyile ezimbini okanye ezintathu ngaphezulu, ezantsi ayinanto kwaye ayilayishi imiyalezo.
Abasebenzisi abaninzi banokucinga ukuba ii-imeyile zilahlekile kodwa zilala. Oku oko kwenzeka rhoqo ngeGmail, iiakhawunti zeHotmail, njl. oko akwenzeki rhoqo xa isemthethweni iakhawunti ye-Apple iCloud. Namhlanje siza kubona indlela yokusombulula le ngxaki ngendlela elula nekhawulezayo.
Kufuneka sivumelanise kuphela imeyile kwakhona
Oko kungabonakala njengengxaki enkulu ekubeni ayiyiyo yonke imiyalezo ye-imeyile esiyigcinileyo kwiakhawunti yethu ye-Gmail, ngaphakathi kwesicelo seMeyile kwi-Mac yethu. Kulula kakhulu ukuba nazo zonke ii-imeyile zibuyele kwiakhawunti yethu kwaye oku kuya kufuneka sivumelanise iakhawunti kuphela.
Ukwenza eli nyathelo siya kuzibeka ngqo ngaphezulu kweakhawunti engaphumeleliyo siya kucinezela Iqhosha lasekunene okanye ucofe kabini kwiTrackpad kwaye ucofe ngokuthe ngqo kukhetho «Ngqamanisa». Uya kubona ukuba ngokuzenzekelayo zonke ii-imeyile onazo kwaye zingalayishwanga zilayishwe kwakhona, ziyavela njengoko sinazo kwisicelo seGmail okanye kwidesktop.
Kukho abanye abasebenzisi abaye basibuza isizathu sokuba ezi imeyile zinyamalale okanye ziyeke ukungqamanisa ngokuzenzekelayo kwaye eso sisicelo I-Apple Mail isenazo ezinye iincukuthu, kusenzima ukuyilawula kwaye ngamanye amaxesha ayinakulayisha ii-imeyile ngokuchanekileyo. Abanye abasebenzisi bacinga ukusebenzisa abanye abaphathi bemeyile kodwa bahlala begcina bebuyela kwiMeyile njengoko kwenzekile kum kwaye ngokuqinisekileyo nawe ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Kutheni zonke ii-imeyile zingaveli kwiPosi kunye nendlela yokulungisa
UJamie Bell ujoyine uWagner Moura kuthotho oluthi "Shining Girls"